March 6, 2020 - CeleLove
ချစ်သူနှစ်ဦး ဘဝတစ်သက်တာ လက်တွဲဖို့ မဖြစ်မနေရှိထားသင့်တဲ့ အချက်များ….
March 6, 2020 CeleLove 0
ချစ်သူနှစ်ဦး ဘဝတစ်သက်တာ လက်တွဲဖို့ မဖြစ်မနေရှိထားသင့်တဲ့ အချက်များ…. သူစိမ်းသက်သက် လူနှစ်ယောက်က ရင်းနှီးပြီး အချစ်စိတ်တွေ ရှိကြရုံနဲ့တော့ ဘဝတစ်ခုလုံး အတူဖြတ်သန်းဖို့ ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဘဝနှစ်ခု ပေါင်းစည်းပြီး တစ်သက်တာ အတူရှိဖို့ စိတ်ကူးရင်တော့ တူညီတဲ့ အရာတွေ ရှိထားဖို့ လိုသလို နားလည်ရမယ့် အရာတွေလည်း […]
Breaking News:မန္တလေးမှ COVID-19 စောင့်ကြည့်လူနာ အမျိုးသမီး သေဆုံး
Breaking News:မန္တလေးမှ COVID-19 စောင့်ကြည့်လူနာ အမျိုးသမီး သေဆုံး မန္တလေး – မန္တလေးမြို့မှ အသက် (၆၈) နှစ်အရွယ် COVID-19 စောင့်ကြည့်လူနာ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ယမန်နေ့(မတ်လ၅ရက်)တွင် သေဆုံးသွားကြောင်း မန္တလေး အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီး ဆေးရုံအုပ် ဒေါက်တာခင်ကျော်က ပြောပါတယ် …။ “ဆုံးတာဟုတ်တယ်။ သံသယက […]
ကျောင်းသူလေးတစ်ဦးရဲ့ ဘဝကို ကယ်တင်လိုက်သူရဲ့ လေးစားဖွယ် မေတ္တာတရား လောကမှာ စိတ်စေတနာကောင်းနဲ့ ကူညီတတ်သူတွေအများကြီးပါ။ အောက်ကဖြစ်ရပ်လေးကို ဖတ်ကြည့်ရင် ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း ချီးကျူးမိကြလိမ့်မယ် ထင်မိပါတယ် …။ ဖြစ်စဉ်ကတော့…“ထ ဖားကန့် အဌမတန်း စာဖြေခန်း အခန်းနံပါတ် ၂ မှာ လူစစ်ကြည့်တော့ ၁ ယောက်လိုနေပါတယ် …။ […]